फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - बोल्न मिल्दैन
बोल्न मिल्दैन लक्ष्मण गाम्नागे
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूका विषयमा निकै जोडतोडले उठिरहेका विवाद सम्बन्धमा ‘बोल्नै मिल्दैन, के बोल्नु !’ भनेर नेपाल बारका अध्यक्षले एक सञ्चारमाध्यमलाई जवाफ दिएछन् । उनले हामी धेरैको मनकै कुरा गरेका हुन् । हामी बारभित्र बारिएर बसेकाहरूलाई त्यस्तै भइरहेको छ, बोलौँ बोलौँ लाग्छ, बोल्नै मिल्दैन । घाँटी खसखस–खसखस गर्छ, भित्रैदेखि कुराहरू हुँडलिएर घाँटीसम्म आउँछन्, ओकल्नै मिल्दैन । सम्माननीयज्यूले पटक्कै ठीक गरिरहनुभा’ छैन भन्ने लागे पनि बोल्न मिल्दैन । उहाँले कत्रो भरोसा गर्नुभएको छ हामीमाथि, उहाँलाई कसरी चोट र्पुयाउनू ? त्यसैले यो घटनामा हाम्रो बारले स्याउलाकै बार बराबर निष्प्राण भएर रमिता हेरेर बस्नुपर्छ, बोल्न मिल्दैन । बारको आफ्नै घेराबारा छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । बारभन्दा बाहिर निस्किएर हल्ला गर्न मिल्दैन ।
कति कुरा हाम्लाई पनि चित्त बुझ्दैन । जस्तै स् त्यो तहको मान्छेले आधा दर्जन जन्ममिति बोकेर नबस्नुपर्ने हो । एसएलसी पास गरेको सर्टि्फिकेट खोइ भनेर दुनियाँले प्रश्न उठाइसकेपछि ‘यीऽऽ !’ भनेर सर्टि्फिकेट तेस्र्याउँदा कुरै सकिनेमा ‘लाऽऽ !’ भनेर प्रश्न उठाउनेहरूकै अनुहारमा लोपार्न नहुने नै हो । आफ्ना विरुद्धका उजुरीमा आफैँ न्यायाधीश भएर फैसला गर्न र आदेश गर्न त झनै नमिल्ने हो । तर, के गर्नु, चित्त नबुझे पनि हामीले बोल्न मिल्दैन ।
हामीले बिनाकारण नबोलेको पनि होइन । राजनीतिमा पोलिटिक्स घुसेकाले नबोलेको हो । राजनीतिमा पोलिटिक्स घुसेपछि एउटा लाइनका मानिसको बोली खुलेका बेला अर्को लाइनका मानिसको मुख बन्द हुन्छ । आफ्नै लाइनका न्यायाधीश, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष वा सभापतिहरूले गरेका र्ओयाइँको विरोध गरेर भविष्यका बाटाहरू बन्द गराउन कसैलाई इच्छा हुँदैन । अझै कति बाँच्नु छ, कति माथि पुग्नु छ, कति अवसरहरूले बाटोमा पर्खिबसेका होलान् । अनि, प्याच्चपुच्च मुख चलाएर आफ्नै घुँडामा बन्चरो किन हान्नू ? यति कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यसैले नेपाल बारले किन नबोलेको भनेर कसैले प्रश्न उठाउँदैमा उत्तर दिनु जरुरी छैन । मुख ट्याप्प थुनेर चुपचाप बस्नुपर्छ । हामीले अहिले बोल्न मिल्दैन ।
नेपाल, फाल्गुन २७, २०७४